ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အေၾကာင္း | IONCLUB
ION Club - တိုက်ရိုက် Baccarat, တိုက်ရိုက်ကစားတဲ့, တိုက်ရိုက်ဆစ်ဘို။
IONClub ကို Interactive Online Network Club ကိုဆိုလိုတာပါ။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝ Interactive မှနှင့် Multi Player ကိုတိုက်ရိုက်အွန်လိုင်းကာစီနို၏ရှေ့ဆောင်ဖြစ်ကြသည်။
(- ထိုင်းနိုင်ငံတကာနယ်စပ်, ဖွိုင်ဖက်မှာရှိတဲ့ - ထိုကမ္ဘောဒီးယားတလျှောက် Aranyaprathet) HOLIDAY Palace Resort & Casino, ပထမဦးဆုံးနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားအတွက်အများဆုံးလေးစားဖွယ်မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံတအခြေခံပြီး IONClub အပြည့်အဝကမ္ဘောဒီးယား၏နိုငျငံတျော၏တော်ဝင်အစိုးရကလိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။
IONClub သင်တစ်ဦးထူးခြားရတာဟာဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများပျော်စရာ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကအဆင့်အထိအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားပြောင်းလဲ။ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ပွား, ရဲ့ buddy list ကိုတိုက်ရိုက်ချက်တင်အဖြစ်လူကြိုက်များလူမှုကွန်ယက် features တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်ရေးကျောက်ပြားပေါ်မှာကစားသမားကစားရန်ခွင့်ပြုနှင့်အပြည့်အဝတစ်ချိန်တည်းမှာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်မည်! အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစုံစားပွဲပေါ်မှာ features နဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အစစ်အမှန်အချိန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များနည်းပညာအတူငါတို့သည်သင်တို့၏တံခါးများအဆင်ပြေစေရန်မှအစစ်အမှန်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံများတွင်ကစား၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရောက်စေကြောင်းပေါင်းစပ်!
IONClub မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေမှတရားမျှတမှုနှင့်လုံခြုံရေးသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်တစ်ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်း Baccarat, ကစားတဲ့သို့မဟုတ် Sicbo ရှိမရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ကားအရောင်းအပေါငျးတို့သကွာအမြဲသင်တို့နှင့်အတူဆက်ဆံဖို့ပျော်ရွှင်ရုံဖုန်းခေါ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များသို့မဟုတ် troubleshooting ပြဿနာများရှိသင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်တီပညာရှင်များ၏အားကောင်းတဲ့အသင်းနှင့်မြင့်မားလေ့ကျင့်သင်ကြားဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအော်ပရေတာကိုသင် 24 နာရီတစ်ရက်ကူညီပေးဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ , IONClub နှင့်အတူ Bet တချို့ကငွေအနိုင်ရမည်ဟုနှင့်လုံး Lotta ပျော်စရာပါ
Copyright © 2012 IONCLUB. All rights reserved. 24/7 ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးဖို့ပျော်ရွှင်နေကြသည် - [email protected] မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး။